Dhageyso: Maxaad kala socotaa in Kaniisad cusub laga furay Hargeysa? | Allsomali24.com
Dhageyso: Maxaad kala socotaa in Kaniisad cusub laga furay Hargeysa?	Added by Ahmed Mohamed - Mogadishu on Aug 11, 2016.Saved under SOMALI NEWS, WAREYSIYO, WHAT'S NEW?Tags: Hargeysa, Kaniisad, laga furay, Somaliland	Idaacadda kaniisadda ugu sarreysa madhabta kirishtanka ee Roman Catholic ayaa baahisay in kaniisad yar dhowaan laga furay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland.
Kaniisaddan, ayaa sida ay idaacadda sheegtay, waxaa lagu sharfay oo lagu xasuusanayaa baadari lagu magacaabo St. Anthony oo ahaa reer Podua.
Baadari lagu magacaabo Giorgio Bertin oo afartan sano muddo laga joogo ahaa wakiil masiixi oo qaabilsanaa Muqdisho iyo Jabuuti ayaa sheegay inay tahay daqiiqad lagu raaxeysto in kaniisaddan dib loo furay.
Giorgio Bertin ayaa sheegay in kaniisaddan oo furan tan iyo bishii February ay ku cibaadeystaan ajaaniibta aaminsan Catholic-ga ee u shaqeeya ururada kala duwan ee Hargeysa ka jira.
Waxa uu sidoo kale sheegay in isaga uu yahay baadariga hoggaaminaya kaniisaddan.
Kaniisaddan ayaa la sheegay in markii hore la furay 1950-kii, hase yeeshee kadib burburkii dagaalada sokeeye ee Soomaaliya hadda dib loo dayac tiray.
“Bulshada Catholic-ga waxa ay tani u tahay adeeg, dadka reer Hargeysa iyo maamulkana waxay muujiyeen xushmad iyo is-aaminaad markii ay noo ogolaadeen inaan adeegsano kaniisaddan” ayuu yiri baadari Giorgio Bertini.
Mar wax laga weydiiyey halista kaga iman karta Al-Shabaab, waxa uu sheegay in Shabaab ay ku xooggan tahay gobollada Koonfureed ee Soomaaliya, hase yeeshee gobollada Woqooyi ay arrintaas ka xasiloon yihiin.
Halkan ka dhageyso wareysiga idaacadda Vatican-ka ay la yeelatay baadari Giorgio Bertin.
Sidoo kale warka ay baahisay idaacadda Vatican-ka, Linkiga ka aqriso. Halkan Click Sii